Madaxweynaha Hirshabelle oo ka walaacsan xaaladda cakirin ee ka taagan Galmudug – Somali Top News
Madaxweynaha Hirshabelle oo ka walaacsan xaaladda cakirin ee ka taagan Galmudug
June 2, 2019 Somali Top News	0 Comments
Madaxweynaha maamulka Hir-shabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa walaac ka muujiyay xaaladda siyaasadeed ee maamulka Galmudug, isagoo sheegay in aan la aqbali Karin tafaraaruqa siyaasadeed ee Galmudug ay haatan wajaheyso.
Madaxweyne Waare ayaa dowladda dhexe iyo cid kasta oo ku howlan kala qeybinta Galmudug in ay faraha kala baxaan si aayahooda ay uga tashadaan umadda reer Galmudug.
Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta kale ee kasoo jeeda Galmudug iyo Hir-Shabeelle ayuu ugu baaqay in aysan marnaba aqbalin in lakala xiro isusocodka Galmudug iyo Hir-Shabeele oo haatan isusocod koodu uu marayo meel aad u xun, isagoo tilmaamay in dadka reer Galmudug aysan u baahneyn in kaanbeyn oo kaliya lagu galo balse ay u baahanyihiin dowladd u adeegta.
“Dadka reer Hiiraan ee Hir-Shabeelle, waxa ay welwel ka qabaan xaalada cakiran ee ka jirta Galmudug, Koonfurta Soomaaliya oo aan sidaan ula tacaaleyno oo deegaan uusan deegaan kale u gudbi Karin ma yeeleyno in Waqooyi naga xiranto oo qalalaase ay gasho, cid kasta oo ku howlana waan kaga digeynaa,” ayuu yiri Madaxweynaha Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare.
← Two missing after blasts at Russian military plant, 22 injured
Madaxweyne Farmaajo oo safar lama filaan ah ku tagay Addis Ababa lana kulmay Abyi Axmad →
Cabsi xoog leh oo soo food saartay Madaxweynaha Galmudug
Duqa Muqdisho oo sharciga la tiigsanaya Wardi Hospital